Maalinta Xasuuqa Aduunka Somaliland Maxay ka Tidhi? | Hargeysa World~Herald
Maalinta Xasuuqa Aduunka Somaliland Maxay ka Tidhi?
UncategorizedMaalinta Xasuuqa Aduunka Somaliland Maxay ka Tidhi?
dawladii Taliskii siyaad Barre waxa uu geyiga Jamhuuriyadda Somaliland ka geystay Xasuuq, gaar ahaan, dabayaaqadii iyo sideetamaadkii iyo bilawgii sagaashamaadkiidkii.
Iyada oo maanta ay tahay maalinta caalamka laga xuso karaamada dadkii ku dhintay xasuuqyadii adduunka ka dhacay ayay xukuumadda Somaliland warkan oo lagu baahiyay bogga wasaaradda arrimaha dibada kasoo saartay lagu yidhi sidan:
“Somaliland waxa ay xustaa kumannaankii qof ee aan waxba galabsan ee la xasuuqay muddadii uu jirtay Taliskii Siyaad Barre. Jamhuuriyadda Somaliland waxay xaqiijinaysaa inay ka go’an tahay inay ku biirto dedaallada lagula dagaalamayo, lagagana hortagayo dhammaan colaadaha sababa xasuuqyada”.